Ciidanka Danab ee XDS oo khasaare ballaaran u geystay Al Shabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidanka Danab ee XDS oo khasaare ballaaran u geystay Al Shabaab
War Saxaafadeed ka soo baxay Xarunta Madaxtooyadda ee Villa Somalia ayaa lagu faahfaahiyey Hawlgal ay Ciiddanka Dowladda iyo kuwa AMISOM kula wareegeen fariisimo ay Alshabaab ku lahaayeen Deegaanka Aw Dheegle ee Gobalka Sh/Hoose.
War Saxaafadeedkaasi waxa uu u qornaa sidatan:
Ciidammada sida gaarka ah u tababaran ee Danab oo ka tirsan Xoogga Dalka Soomaaliyeed, oo ay wehliyaan Ciidanka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM, ayaa waxyeelo xooggan ugu geystey Al Shabaab degaanka Aw-Dheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Ciidammada huwanta ayaa cagta mariyay laba xero oo Al Shabaab ay halkaasi ku lahayd, waxaana isla goobtaasi lagu dilay saddex ka mid ah Alshabaab, iyadoo laba gaari oo kuwa dagaalka ahna laga burburiyay.
Ciidanka Danab iyo kuwa Midowga Afrika ayaa markii ay goobtaasi gaareen waxaa iska caabbin ay kala kulmeen Al Shabaab, laakiin ma jiro wax khasaare ah oo soo gaaray Danab iyo AMISOM midkoodna.
Ciidammada huwanta ayaa maalmahan gobolka Shabeellaha Hoose ka wadey hawlgalo culus oo ay ku waxyeeleynayaan dhaqdhaqaaqyada Al Shabaab ay gobolka ka waddo.
Somali Youth Demand Political Participation to Parliament & Cabinet